मीन कुन चिन्हमा आकर्षित हुन्छ? - राशिफल
मीन कुन चिन्हमा आकर्षित हुन्छ?
प्रश्नहरू र उत्तम उत्तरहरू - राशिफल मीन
मीनको साथ सब भन्दा मिल्दो संकेतहरू सामान्यतया मानिन्छवृष, कर्क, वृश्चिक र मकर। मीनसँग कम से कम मिल्दो संकेतहरू प्राय: मिथुन र धनु मानिन्छ। सूर्य संकेतहरू तुलना गर्दा अनुकूलताको राम्रो सामान्य विचार दिन सक्छ।
के तपाईंलाई थाहा छ कि तपाईंको धेरै शारीरिक लक्षणहरू तपाईंको राशि चिन्हमा निर्भर छन्? हो हो, ताराहरूले तपाईंको उपस्थिति र लक्षणहरू निर्धारण गर्न सक्दछन् र भविष्यवाणी गर्न सक्छन् कुन कुराले तपाईंलाई अरूहरूको लागि अपूरणीय बनाउँछ। नमस्कार दर्शकहरु र बिस्टमा पुन: स्वागत छ! यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको शारीरिक विशेषताहरूले तपाईंलाई सुरक्षित महसुस गराउँदछ। यस्तो संसारमा जहाँ सबैजना उनीहरू कस्तो देखिन्छन् भन्ने बारे अनिश्चित छन्, यसले तपाईको सब भन्दा आकर्षक शारीरिक गुणहरू के हो भनेर जान्न मद्दत गर्दछ।
तपाईंलाई खास बनाउने कुरा महसुस गर्नाले तपाईंलाई आफैंमा प्रेम गर्न मद्दत गर्दछ। प्रत्येक राशि चिन्हमा एक विशिष्ट शारीरिक विशेषता हुन्छ जसले परिभाषित गर्दछ कि तिनीहरू को हुन् र तिनीहरूलाई बाँकीबाट अलग राख्छ। आजको लेखमा, हामी तपाईंको राशि चिन्हको आधारमा तपाईंको सब भन्दा आकर्षक शारीरिक गुणहरूको नाम दिन गइरहेका छौं।
उत्तम छालाको वृषभदेखि लिएर आकर्षक आँखा भएको तुला, अद्भुत कपाल भएको सिंह, वृश्चिकको बेरोजगार चिन, उत्तम ओठहरूसहित कुम्भसम्म र अधिक, उनीहरूको बारेमा अझ बढी जान्न अन्ततिर हेर्नुहोस्। मेष: लौकिक मेषको जनावर भेडा हो, र यसलाई दुई सी hornको प्रतीकले प्रतिनिधित्व गर्दछ। एक मानवी भेडा उनीहरूसँग वास्तविक सीs नहुन सक्छ, तर तिनीहरूका बलियो ब्रोभहरूले यस गहन आकारको नक्कल गर्छन्।
तपाइँ सब भन्दा आगोको साथ एक भनेर चिनिनुहुन्छ। तपाईंसँग सुन्दर बाक्लो भौंहरू छन् जुन तपाईंको प्रशंसकहरूलाई मोहित गर्दछ र त्यो तपाईंको सबैभन्दा आकर्षक शारीरिक गुण हो। चाहे यो एक पुरुष वा एक महिला हो, तिनीहरूको ब्राउजहरू कमानदार हुनेछन् कि हामी सबै तृष्णा गर्नेछौं।
दुई ब्राउजले तपाईंको व्यक्तित्वको दुई विपरीत छोरहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ, उग्रता र निर्दोषता। के तपाईंले कहिल्यै मेषलाई भेट्नुभयो वा डेट गर्नुभएको छ जसको अद्भुत भौंहरू छन्? तिम्रो भेडा के हो? 'उत्कृस्ट गुणस्तर? हामी तलका टिप्पणीहरूमा जान्न चाहन्छौं! वृषभ: आराम र लापरवाह वृषभ ब्रेकआउटको कारण चिनिने तनावमा लिप्त हुँदैन; तिनीहरू आफूले चाहेको कुरा खाने गर्दछन्, उनीहरू सकेसम्म सुतेका छन् र उनीहरू आफ्नै व्यवसायमा ध्यान दिन्छन्, फलस्वरूप खुशीको छाला हुन्छ। यद्यपि यसको मतलब तिनीहरू लापरवाह छन्।
तिनीहरू प्राय: धेरै सावधान हुन्छन् र उनीहरूको छालाको राम्रो देखभाल गर्दछन्। उनी भित्रबाट चल्छिन् र उनको मेथिकल र मेहनती छाला एरेगाइमेमा काम गर्दछिन। तपाईको छाला निस्सन्देह उसको उत्तम सम्पत्ति हो।
राम्रो छालाले कहिलेकाँही असुरक्षित वृषभलाई उसको आत्मविश्वासमा मद्दत गर्दछ। जुम्ल्याहा: जुम्ल्याहा मध्ये एक उत्तम गुण भनेको उनीहरूको संक्रामक मुस्कान हो, जसले उनीहरूको जीवन्त व्यक्तित्वको प्रशंसा गर्दछ। तिनीहरूसँग आफ्नो मुस्कान मार्फत कुराकानी गर्ने क्षमता छ।
यदि उनीहरू तपाईंमाथि हाँस्छन् भने, तपाईंलाई सदाको निम्ति पिटाइन्छ। तिनीहरूको वास्तविक मुस्कानको कारण, तिनीहरूले तपाईंलाई अझ बढी विश्वास गर्न सक्दछन्। र तिनीहरूले तपाईंलाई कहिले पनि निराश पार्ने छैनन्, तिनीहरू सँधै हुने छन्, तिनीहरू तपाईंलाई पनी आवश्यक परेको खण्डमा हुन्छन्।
अरूलाई खुशी पार्न तिनीहरू मुस्कुराउँदैनन्। तिनीहरू जहाँ गए पनि खुशी र प्रेम फैलाए। तपाईले अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई हँसिदै केही नगरी पनि खुसीमा बदल्न सक्नुहुन्छ।
जुम्ल्याहा मुस्कान यति उत्तम छ कि तिनीहरू टूथपेस्ट निर्माताहरूका लागि ब्रान्ड एम्बेसेडरहरू हुन सक्दछन्। क्यान्सर: कहिल्यै कसैको पेट देखेको छ र drooled? यदि त्यसो हो भने, त्यसोभए तपाईं सायद क्यान्सर बिरामीको पेटलाई हेर्दै हुनुहुन्छ जुन उनीहरूको सबैभन्दा आकर्षक शरीरको अंग हो, र यथोचित यो रक-हार्ड एब्सले कुँदिएको छ, यसले तपाईंको ध्यान खिच्नेछ। क्यान्सर महिलाहरू आफ्नो गर्भावस्थामा अधिक चम्किन्छन् र यो सुन्दर अवधिको अवधिमा अझ सुन्दर देखिन सक्छन् तपाईको पेटमा रहेको अन्तर्ज्ञान प्राय: धेरै बलियो हुन्छ; तपाई सधै उसलाई नियमित व्यायामको माध्यमबाट शीर्ष आकारमा राख्न प्रयास गर्नुहुन्छ।
लियो: लियो सबैभन्दा आकर्षक राशि संकेत हो। मास्टर शोमेनको रूपमा, तिनीहरू पनि धेरै आकर्षक छन्। लियो जस्ता, तिनीहरू स्पटलाइटमा हुनको लागि जन्मेका थिए।
तपाईं बाँच्नुहुन्छ र श्वास मनमोहक, कुनै श .्का बिना। उनीहरुसँग एक काल्पनिक माने छ जुन मोटो र चम्किलो छ, धेरै सिंहको जस्तो। बाक्लो कपालको साथ त्यो सुन्दर टाउको तिनीहरूको उत्तम विशेषता हो र बुझ्दछन् कि उनीहरूले यसलाई फुकाउन मन पराउँछन्।
तिनीहरूको चमकदार लकहरू टाढाबाट देख्न सकिन्छ। वास्तवमा, तिनीहरू सबैको आकर्षित गर्न, आफ्नो कपालको देखभाल गर्न अतिरिक्त माईलमा जान्छन्। प्रत्येक पटक जब तिनीहरू कोठामा पस्दछन् उनीहरू आदर देखाउँछन् र उनीहरूको कपालले सबैको ध्यान आकर्षित गर्छ कन्या: कन्या, कन्या राशि चिन्हको रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ।
र उनी सबै भन्दा आकर्षक सुविधाहरु उनको फिला र नितंब हो। र हामी केवल महिलाको बारेमा कुरा गरिरहेको छैनौं। यो दुबै लिंगको लागि समान छ।
दुबै कुमारी र महिलाहरु का आकर्षक फिला र नितंबहरु छन्। अरुहरु जिम जान्छन् वा इम्प्लान्टहरु पनि ठूलो र उच्च बट प्राप्त गर्न को लागी, Virgos यसको केहि गर्न को लागी छैन किनकि उनीहरु पहिले नै एक सुन्दर एक संग आशीर्वाद दिएका छन्। तिनीहरू जेसुकै पनि लगाउँछन्, तिनीहरू बर्बाद हुन्छन् किनकि तिनीहरू लगाउने हरेक कुरामा अद्भुत देखिन्छन्।
तुला: आँखा व्यक्तिको अनुहारको सबैभन्दा उल्लेखनीय चीजहरू मध्ये एक हुन्, र तुला राशि सबै राशिको भन्दा सब भन्दा सुन्दर हुन्छ। त्यसैले उनीहरूसँग आँखा सम्पर्क बनाउँदा होशियार हुनुहोस् वा तपाईं तिनीहरूको आँखामा हराउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरू यति उज्यालो र न्यानो छन् कि जब तपाईं तिनीहरूलाई हेर्नुहुन्छ तपाईं तिनीहरूको आत्मामा देख्न सक्नुहुन्छ।
र यदि तपाईं तिनीहरूको आँखामा हेर्नुभयो भने तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि ती हेरचाह गर्ने र मायालु ब्यक्तिहरू छन् जुन एकै समयमा चंचल र हँसीमुख छन्। त्यहाँ कुनै तरीका छैन कि तुलाले आफ्ना भावनाहरू लुकाउन सक्दछ किनकि यदि कसैले तिनीहरूको आँखामा हेर्छ भने, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि तिनीहरू दु: खी छन्, निराश छन् वा खुशी छन्। तिनीहरूका आँखाले तिनीहरूको रहस्यहरू प्रकट गर्दछ जुन तिनीहरू अन्यथा प्रकट गर्दैनन्।
चाहे उनीहरू मेकअप लगाउँदछन् वा प्राकृतिक देखिन्छन्, तिनीहरूको आँखा उनीहरूको अनुहारमा चम्किरहेका ताराहरू जस्ता हुनेछन्। वृश्चिक: वृश्चिक राशिका नागरिकहरू वास्तवमै केहि आकर्षण राशिको संकेतहरू हुन्। तिनीहरूको जिद्दी वफादारीले उनीहरूको आकर्षणलाई थप गर्दछ।
तिनीहरू अरूको अपवाद बिना खडा हुन्छ, जे भए पनि। र उनको सबैभन्दा आकर्षक शारीरिक लक्षण उनको ठोडी हो। वृश्चिक अन्तर्गत जन्म लिनेहरूको अनुहार सुविधाहरू प्राय: कडा र कुञ्जी आकारमा हुन्छन्।
तर तिनीहरूको बaw्गारा विशेष हो कि सबैले आशिष्‌ पाउँदैनन्। जबडा खेलमा बिच्छीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि नखोज्नुहोस्, तपाईंले हराउनु हुनेछ। धनु: धनुले योद्धाको प्रतीक झैं, यस चिन्ह अन्तर्गत जन्म लिनेहरूसँग अक्सर योद्धाको शरीर हुन्छ।
तपाईं अरू भन्दा धेरै चपल र अग्लो हुनुहुन्छ। हामी मध्ये धेरै ठूलो हुन चाहन्छौं। र धनुको अग्लो हुने राम्रो सम्भावना छ, ज्योतिषी उचाईको साथ के राम्रो हुन्छ? ठीक छ, खुट्टा को एक राम्रो जोडी।
एक धनु लेग आफ्नो समग्र शारीरिक उपस्थिति सुधार गर्नेछ। यदि तपाईं यस राशि चिन्हको महिला हुनुहुन्छ भने तपाईं समुद्री तटमा जानुहुँदा तपाईंको खुट्टा देखाउँदा कुनै समस्या हुने छैन। मकर: अनुहारको बिचमा नाक हुन्छ र यो शरीरको ती अंश मध्ये एक हो जुन आउन धेरै गाह्रो छ।
यद्यपि मकर संकेतहरू ती केही मध्ये एक हुन् जसको दाहिने नाक हुन्छ। त्यहाँ धेरै सेलिब्रेटीहरू छन् जसले आफ्नो नाकको आकार बदल्न शल्यक्रिया गरेका छन्। तर मकर राशीले यी समस्याहरू हुने छैनन् किनकि उनीहरूसँग जो कोही पनि खुसी हुनेछन् जुन उनीहरूको अनुहारमा पूर्ण रूपमा फिट हुन्छन्।
यो केन्द्रीय, शाब्दिक र लाक्षणिक रूपमा देखिन्छ। यो यस्तो आकर्षक सुविधा भएकोले, यसले यसको अन्य सुविधाहरूको ओभर शेड गर्न सक्छ। कुंभ: कुम्भमा ओठहरू हुन्छन् जसले तपाईंलाई चुम्बन गर्दछ।
दुबै पुरुष र महिला यस राशि चिन्हको राम्रो, रमाईलो ओठ छन्; pouty र आकर्षक, तिनीहरूले भगवान पहिले नै राम्रो देखिनको लागि बाँच्न p lump उपहार छ। यदि तिनीहरूले आफ्नो सुन्दर मूर्तिकारित ओठहरूसँग कुरा गर्न थाल्छन् भने, त्यहाँ कुनै तरिका छैन जुन मानिसहरूले तिनीहरूलाई सुन्दैनन्। अरूले तपाईंको मुखबाट निस्कने प्रत्येक शब्दलाई समात्न प्रयास गर्नेछन् किनकि उनीहरूले निर्णय गर्न सक्दैनन् कि तपाईंको ओठ वा तपाईंले बोल्ने तरिका बढी आकर्षक र आकर्षक छ।
एक व्यक्ति को रूप मा, हाम्रा भावनाहरु लाई संचार गर्न धेरै तरिका छन्। र शारीरिक अन्तर्क्रिया एक अर्को राम्रो तरीकाले प्रेम गर्न जुन तपाईं अर्को व्यक्तिको लागि गर्नुहुन्छ। एक्वैरियनहरू उत्तम हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ किनभने उनीहरूसँग उत्तम ओठ छन्।
चुम्बन र राम्रो गर कुनै राम्रो सम्बन्धको लागि आवश्यक छ। त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन् जुन तपाईं यो गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले यो बोरि get हुँदैन। उनीहरू के हुन् भनेर जान्नको लागि '21 किसिमका किसिमका प्रकारहरू जसले तपाईंको प्रेम जीवनलाई अझ राम्रो बनाउँदछ 'भन्ने शीर्षक भएको लेख हेर्नुहोस्। अब फिर्ता तपाईंको राशिफल साइन मीनको आधारमा सबैभन्दा आकर्षक विशेषता: यस चिन्हको सबैभन्दा उत्साहजनक सुविधा तिनीहरूका खुट्टा हुन्, जुन तिनीहरूको स्वतन्त्र प्रकृतिको प्रतीक हो।
तिनीहरू दौडन मन पराउँछन् र तिनीहरूसँग दौडन, स्वतन्त्रता छ मील यात्रा र तिनीहरूको सुन्दर खुट्टाको साथ मानवता सेवा गर्न। तिनीहरू प्रगतिसँग सम्बन्धित छन्, जसको मतलब खुट्टाले उनीहरूलाई यात्रा गर्न र मानवता र समाजलाई मद्दत गर्न नयाँ तरिकाहरू र विचारहरू अन्वेषण गर्न मद्दत गर्दछ। विश्व र आफुलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर सोच्ने समय छ।
तिनीहरूका खुट्टाका कारण, उनीहरूलाई खुला-खुल्ला जुत्ता लगाउने कुनै समस्या हुनेछैन। राशिचक्र संकेतहरूले केवल तपाईंको सब भन्दा आकर्षक गुणहरू मात्र बताउँदैन, तिनीहरूसँग तपाईंको जीवन र तपाईंको भविष्यका थुप्रै पक्षहरू प्रकट गर्ने क्षमता हुन्छ। तपाईलाई अचम्म लाग्छ हाम्रो मतलब के हो? यहाँ तपाईंको उत्तरहरू प्राप्त गर्नुहोस्: तपाईंको राशि चिन्हको आधारमा तपाईंको सपनाको घरको बारेमा जान्नुहोस् तपाईंको राशि चिन्हमा आधारित तपाईंको लागि उत्तम क्यारियरको बारेमा जान्नुहोस् यी २ लेखहरू तपाईंलाई पनी जीवनमा हुने छनौटहरूले कसरी असर गर्ने भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ। लाईक गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानलको सदस्यता लिनुहोस्।
के तपाईं राशि चिन्ह र तिनीहरूको शक्तिहरूमा विश्वास गर्नुहुन्छ? हामीलाई तल टिप्पणी अनुभागमा थाहा दिनुहोस्!
मीनले कसले विवाह गर्नुपर्छ?
को लागी सबै भन्दा राम्रो खेलमाछाअर्को देखिन्छमाछावा वृश्चिक जे होस्, पिसियनहरू जो आफैंलाई रोमान्टिक रूपमा कम मिल्दो स signs्केतको साथमा अल्झिन्छन्हुनु पर्छनिराश छैन। धेरैसम्बन्धरविवाहकथित अमिल्दो संकेतहरूको बीचमा रह्यो।
कस्तो प्रकारको व्यक्ति मीन हो?
माछाएक संवेदनशील पानी चिन्ह हो, नेप्चुन ग्रह द्वारा शासित। तपाईंको चिन्ह तरल छ र अन्डरडगमा समानुभूति राख्छ। तपाईका लागि अरु व्यक्तिको अनुभव महसुस गर्न सजिलो छ कि उनीहरूले तपाईको आफ्नै अस्पष्ट बनाउन सक्छन्। तपाईं अस्पष्ट र पलायनवादी हुन सक्नुहुन्छ, तर कोमल र सहज भई यसको लागि मेकअप गर्नुहोस्।19 २०२१
के यो मीनको लागि खराब समय हो?
माछामूल निवासीहरूले गुणवत्ताको आनन्द लिने छन्समयर वर्षभरि आफ्नो जीवनसाथीसँगै आनन्दित क्षणहरू। जबकि, जनवरी देखि अप्रिल को अवधि तपाईंको विवाहित जीवनको लागि उत्कृष्ट हुनेछ किनकि स्व घरको प्रभु लाभका घरमा ट्रान्जिट हुनेछ र विवाहको घरको पक्ष।
अर्को एक चोटि जनावरको क्षेत्रको रहस्यमय पक्षमा स्वागत छ। जहाँ हामी ब्रह्माण्डमा हेर्छौं हामीलाई यसको राशि ज्ञानको साथ लाड गर्न। हामी हेर्दछौं तपाईंसँग केहि सम्बन्धहरू बारे प्रश्नहरू छन्, प्रिय पशु-दर्शक, र आज यो ताराहरूसँग तपाईंको जडान हुनेछ।
तपाई कसलाई विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? तपाई कोसँग टाढा बस्नु पर्छ र अन्य राशि संकेतहरू, जो तपाईको प्रयासको रूपमा, तपाईका साँचो मित्र कहिल्‍यै हुँदैन। हेरिरहनुहोस् र हामी फेला पार्नेछौं। ब्रह्माण्डले तपाइँको जवाफ दिन अघि तपाइँले चाहानुहुन्छ, सदस्यता लिनुभयो र सूचना बटनमा हिट गर्नुहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस् ताकि तपाइँ कुनै नयाँ लेखहरू नछुटाउनुहोस्, अन्त्यसम्म यस लेखलाई हेरेर हाम्रो च्यानललाई समर्थन गर्न नबिर्सनुहोस्।
ARIES // FIRE तपाईं राशिफलमा मेष राशिको कारण एक नम्बरमा हुनुहुन्छ। तपाईं एक नेता हुन मन पराउनुहुन्छ र सँधै संख्या १ को लागी आँखा राख्नुहोस् फायर साइनको रूपमा, तपाईं एक भावुक व्यक्ति हुनुहुन्छ जो धेरै रचनात्मक र विश्वस्त हुनुहुन्छ।
जे होस्, तपाईं थोरै अधीर र मुडी हुन सक्नुहुन्छ जब तपाईं एक वृष राशिको साथ हुनुहुन्छ जो राम्रो जडित हुन जानिन्छ र क्यालोरी अभ्यास गर्दछ। वृषभलाई अक्सर सम्बन्ध समाप्त हुन्छ भनेर चिनिन्छ जब यो अस्वास्थ्यकर हुन्छ, र उनीहरूको निर्णयहरूमा कुनै सम्झौता नगरिने छैन। तपाईंको लागि, क्याक्रेरियन्स पनि एक गाह्रो मित्रता हुन सक्छ।
वृषभ // पूर्व वृषभ, तपाईं सुन्दरता र राम्रो साथीहरू द्वारा घेरिन मन पर्छ। तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ के चाहानुहुन्छ र यससँग टाँसिरहनुहोस्। तपाईं एक यथार्थवादी हुनुहुन्छ र धेरै वफादार साथी हुनुको उत्कृष्ट गुण छ।
तर जब यो तपाइँको मित्रतामा आउँदछ, अस्थिर जुम्ल्याहा सम्भवत: कसैबाट टाढा हुन चाहानुहुन्छ। वृषभलाई नियन्त्रणमा राख्न मनपर्दछ, र राशिफल मिथुन राशि मिथुन नियमित रूपमा आफ्नो मन परिवर्तन गर्न जान्छन्। र प्रिय वृषभ, जैसा कि हामीले माथि उल्लेख गरिसकेका छौ, तपाईसँग सम्भवतः उत्तम समय मेषको हस्ताक्षरको साथ हुनेछैन।
GEMINI // आकाश मिथुन, तपाईं एक जिज्ञासु व्यक्ति हुनुहुन्छ! तपाईं द्रुत-विवेकी र अत्यन्त सामाजिक र संचारक हुनुहुन्छ। तपाईं सधैं रमाईलोको लागि तयार भएकोमा चिनिनुहुन्छ, तर तपाईं आफ्नो छिटोमा धेरै चाँडै नै बेचैन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। विडंबना, यो तपाईं को लागी गाह्रो हुनेछ Zeitge कन्या मौका को लागी केहि छोड्दैन र अक्सर धेरै लजालु छ।
कन्याको कन्जर्वेटिभ प्रकृति मिथुनको बाहिर जाने व्यक्तित्वसँग मेल खाँदैन र जेमेनी फलिफाप हुने कुनै पनि परिस्थितिलाई सम्भावित तुल्याउँदछ। यी दुवै राशि चिन्हले आफ्नो अभिव्यक्त गर्न कठिनाई भएको छ, त्यसैले कुनै पनि समयमा द्वन्द्व वा झगडा हुन्छ, दुवै राशिको दुबै मेलमिलापको दिशामा पहिलो कदम चाल्दैन। क्यान्सर // वाटर क्यान्सर तपाईं राशिफलको सबैभन्दा भावनात्मक र संवेदनशील लक्षण हुनुहुन्छ।
तपाईं आफ्नो भित्री आत्म संग धेरै धेरै ट्यूनमा हुनुहुन्छ र स्वाभाविक रूपमा राम्रो साथी हुनुहुन्छ। सधैं एक कान छ र काँध हुन को लागी कसैले रोएको छ। तर किनभने तपाईं एकदम वफादार हुनुहुन्छ, तपाईंलाई तलका ती व्यक्तिहरू मन पराउँदैनन्।
धनु तिनीहरूलाई के चाहिन्छ भन्न को लागी केहि पनि भन्न जानिन्छ। धनु एक अग्नि चिन्ह हो र यसले तपाइँसँग सीधा विवाद गर्नेछ, क्यान्सर, किनभने तपाइँ तत्वहरू पानी द्वारा शासित हुनुहुनेछ। क्यान्सरले आफूलाई मन पराउनेहरू भरिएको खुशीयालीले भरिएको घरमा बस्न मनपराउँदछ, जसमा धनुले जहिले पनि लिओको आवश्यकता पाउनेछ // फायर सिंहहरू प्याकका नेताहरू हुन जान्छन्; तिनीहरू गतिशील हुन्छन् र प्रायः निर्ममता र विश्वासका साथ आफ्ना लक्ष्यहरू प्राप्त गर्छन्।
लियोस थोरै आत्मकेन्द्रितका रूपमा परिचित छन्, यद्यपि (कसले तपाईंलाई दोष दिन्छ, तपाईं अद्भुत हुनुहुन्छ)! जब दीर्घकालीन मित्रता बनाउने कुरा आउँछ, लियोस कहिलेकाँही उनीहरूको गर्वको कारण सम्मिलित हुन संघर्ष गर्न सक्छन्। जब तपाइँ मीन राशिफल अन्तर्गत ती व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ म सावधान रहन्छु। मीनहरू पानीको तत्वद्वारा शासित हुन्छन् र तपाईं लिओ आगोले शासन गर्नुहुन्छ।
पानी र आगो बस मिसिएन, र तपाईंको व्यक्तित्व भिन्नता तपाईं बढि बढ्नेछ। मीन एक अधिक निष्क्रिय र संवेदनशील प्रकारको चिन्ह हो र तपाईको धृष्टता तिनीहरूको स्नायुहरूमा आउँछ। VIRGIN // EARTH कन्या, तपाईं राशिफल मा सबैभन्दा कठिन काम राशिफल हुन सक्छ, र त्यो एक उत्कृष्ट गुण हो! तर कहिलेकाँही यसले अझ राम्रो गर्न सक्दछ आफैलाई खेल र व्यक्तिगत सम्बन्धहरूको लागि केहि समय दिनुहोस्! तपाईं अक्सर कन्यालाई गलत अर्थ लगाइनुहुन्छ किनभने तपाईंलाई आफ्नो अभिव्यक्ति गर्न गाह्रो लाग्छ, तर एक पटक तपाईंले साथी बनाउनुभयो भने तपाईं अत्यन्त दयालु र वफादार हुनुहुन्छ।
तपाईं अति बुद्धिमान, प्रिय कन्या हुनुहुन्छ, जसले एक्वेरियस मित्रतासँग विवेकी बहस निम्त्याउन सक्छ जो अत्यन्तै बुद्धिमान् पनि हुन्छ। यो वास्तवमै तपाईंको गल्ती कन्या हैन, कुम्भ राशि मान्छे समय चाहना र समय मा स्वभाविक हुन सक्छ // आकाशवाणी, तुला। कूटनीतिक।
यस्तो देखिन्छ कि तपाईं सबैसँग मिलेर बस्न सक्नुहुन्छ! तर त्यो पतन सधैं हुँदैन। तुला, तपाईलाई राशि चक्रको सबैभन्दा सहकारी र सुन्दर संकेतका रूपमा चिनिन्छ, तर तपाईं नाटकको प्रशंसक हुनुहुन्न। कीवर्ड, बिच्छू।
वृश्चिक धेरै क्रेष्म्याटिकका रूपमा चिनिन्छ र प्रायः जसो उत्साहको जीवन बिताउँछ। वृश्चिकलाई पनि कहिलेकाँही रहस्यमय रूपमा जानिन्छ, र तुला यो व्यवहार व्यवहार गर्दैन। SCORPIO // WATER S Corio, तपाईं रमाईलो र भावुक हुनुहुन्छ! तपाइँ आफ्ना भावनाहरू कसरी अभिव्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा जान्नुहुन्छ र तपाइँ एक वास्तविक साथी हुन सक्नुहुन्छ।
तपाईं प्रायः धेरै रचनात्मक र व्यक्तित्वयुक्त हुनुहुन्छ, तर तपाईं ध्यानको केन्द्र र पार्टीको जीवन बन्न चाहनुहुन्छ। यो केवल समझ मा बनाउँदछ कि तपाईं सम्भवतः एक संकेत संग टकराव गर्न सक्नुहुनेछ जुन वास्तवमा तपाईं जस्तो मिल्दो छ, लियो। ती दुबै अत्यन्त दृढ इच्छाको पात्रहरू छन् र दुर्भाग्यवश उस्तै जिद्दी।
जबकि यी समानताहरू कहिलेकाँही वास्तविक मैत्रीको अर्थ हुन सक्दछ, ती दुईको लागि झगडा र बहस गर्न अधिक सामान्य हुन्छ। धनु // फायर तपाई धेरै रमाइलो धनु हुनुहुन्छ। तपाईं प्रकृति अन्वेषण र नयाँ व्यक्तिहरू भेट्न मन पराउनुहुन्छ।
तपाईं स्वतन्त्रताको लागि अरू कसैलाई चाहनुहुन्न र तपाईं बाँध्न सक्नुहुन्न। पहिले नै उल्लेख गरिए अनुसार, राशिफल चिन्ह जुन तपाईं सँधै साथ नपर्न सक्नुहुनेछ राशि चिन्ह क्यान्सर अन्तर्गत ती हुन्। क्यान्सर कहिलेकाँही मैत्री मैत्री हुन सक्छ, र असुरक्षित पनि हुन सक्छ, जसको धनु स्थिर हुन सक्दैन।
बन्धनको थोरै सint्केत र तपाईं, धनु, फेरि बाटोमा हुनेछ। CAPRICORN // पूर्व मकर तपाईं कारणको स्वर हुनुहुन्छ, तपाईं जिम्मेवार हुनुहुन्छ, अनुशासित हुनुहुन्छ र तपाईंले आत्म-नियन्त्रणको कलामा महारत प्राप्त गर्नुभयो। तपाईं अत्यन्त स्वतन्त्र हुनुहुन्छ र कहिलेकाँही तपाईंलाई साथीहरू बनाउन गाह्रो लाग्छ।
तपाईले अनुभवबाट सिक्न चाहानुहुन्छ, तर तपाई कहिलेकाँही थोरै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई के को लागी हस्ताक्षर भइरहेको छ जो सहन गर्दैनन्। तपाईं दुबै चरम-टाउको हुनुहुन्छ, तर तुला धेरै धेरै सामाजिक छ र तपाईंको स्नायुहरूमा जान सक्छ र म्याक्रोन्कको जस्तो देखिन्छ। AQUARIUS // एयर कुम्भ तपाईं यति मौलिक हुनुहुन्छ र तपाईं वास्तवमै राम्रो लडाई लड्नुहुन्छ।
जुम्ल्याहा जत्तिकै कठोर नहुन सक्छ, तपाईंसँग प्राय दुई पाटा हुन्छन्। दुबै लजालु र शान्त, तर पनि धेरै उत्साहित र ऊर्जावान! तपाईंसँग सिक्काका दुबै पक्षहरू र प्राय: कुनै पनि अवस्थामा शान्ति ल्याउने क्षमता छ। यद्यपि, कुम्भ एक अलिआउट छ र यहाँ र अहिलेको अनुभवको आनन्द लिन्छ, जसले जिम्मेवार र अनुशासित मकरलाई घृणा गर्दछ।
तपाईं जहिले पनि मीनको साथ नहुन सक्नुहुन्छ। कुम्भहरू तपाई जस्तो उनीहरूलाई धेरै भावुक लाग्ने छन्, जबकि बदलामा तपाईले अलि चिसो पाउन सक्नुहुन्छ। फिश // पानी मीन तपाई एक रचनात्मक र कलात्मक चिन्ह हुनुहुन्छ! तपाईं कोमल र भावनाहरूमा धेरै धुनमा हुनुहुन्छ।
तपाईं धेरै दयालु र एकदम निस्वार्थ हुन जान्नु हुन्छ। दुबै शानदार गुणहरू जब यो साथीहरू बनाउने आउँदछ। त्यहाँ वास्तवमा कुनै संकेत छैन जुन तपाईं सँगसँगै जान सक्नुहुन्न, तर मिथुन समयको लागि तपाईंको लागि धेरै नै हुन सक्दछ, ठूलो-मिथुन मिथुन राशिको लागि असहज हुने झुकाव र बदलामा मिथुनले प्रयत्न गर्ने छ तपाई त्यस्तो कसैमा हुनुहुन्छ जुन तपाईं हुनुहुन्न।
र अब यस्तो देखिन्छ कि यो सबै ब्रह्माण्डस आज हाम्रो लागि छ, प्रिय जनावर दर्शक। हामीलाई आराम गर्न समय चाहिन्छ, तर कृपया फेरि आउनुहोस् र भविष्यमा ताराहरूलाई अझ बढी प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। के यो लेखले तपाईको सम्बन्धहरुलाई राम्रोसँग वर्णन गर्दछ? वा तपाइँसँग एक साथी छ जसले यस सूचीमा सबैलाई उल्ल ?्घन गर्छ? तपाईको मिल्ने साथी कुन चिन्ह हो? हामीलाई तलका टिप्पणीहरूमा थाहा दिनुहोस्!
मीनको कमजोरी के हो?
शक्तिहरू: दयालु, कलात्मक, सहज, दयालु, स्मार्ट, संगीत।कमजोरीहरू: धेरै चीजहरूको डरले पनि वास्तविकताबाट भाग्ने नाउदी, मुडी, साधारणतया पीडित हुन्छ।माछामन नपर्ने: आलोचना, विगतबाट छुटकारा पाउन असमर्थता, हिंसा, क्रूर व्यवहार।
मीन सबैभन्दा मिल्ने साथी को हो?
सबै भन्दा, माछाको चिन्ह निस्वार्थ र दिईएको छ, र काम गर्दछसबै भन्दा राम्रोसंगसाथीहरुजो उनीहरूको कोमल, कमजोर हृदयको सावधान रहनेछ। प्राकृतिकसाथीहरु: वृष, कर्क, वृश्चिक र मकर, भरपर्दो, आधारभूत र पोषण चिन्हहरू जसले प्रदान गर्दछमाछाविश्वासको स्थिर आधारको साथ।पन्ध्र २०१।
मीन जोसुकै हो?
मीन सोलमेट को हो? मीनहरू काल्पनिक, मायालु, र शान्ति खोज्ने भएकोले, उनीहरूले एक आत्मीय साथीसँग पूर्णता पाउनेछनवृष राशि। वृषभ मीनको रोमान्टिक पार्टनर हुन सक्छ। वृषभ, व्यावहारिक, रोमान्टिक, मायालु, र मीनको लागि सबैभन्दा मिल्ने साथी हुन सक्छ।बीस २०२०।
मीन मनपर्ने रंग के हो?
धेरैमाछामाछा खोज्नुहोस्रंगएक्वा वा टिल तिनीहरूको होमनपर्ने। अन्यमाछाएक मध्यम निलो फेला पार्नुहोस् वा समुद्री निलो तिनीहरूको होमनपर्ने रंग।
के मीन सम्बन्धमा खराब छ?
यदि मीन विश्वास गर्न थाल्छन् कि तिनीहरू सम्बन्ध र प्रेमको अवमूल्यन छन्, तिनीहरूलेविनाशकारी तरिकामा कार्य गर्दछजस्तै धोकेबाज वा यस्तै तर्कपूर्ण अभिनय गर्नुहोस् कि यो तिनीहरूको पार्टनरलाई उनीहरूको छेउमा उभिन असम्भव बनाउँदछ।।। २०१।
मीन सबैभन्दा खराब खेल के हो?
माछामनमोदक, अत्यधिक संवेदनशील, र चीजहरूको साथ आफ्नो समय लिन को लागी, विशेष गरी निर्णयहरू। आगो चिन्ह मेष अधीर, आवेगहीन, र जिद्दी हो, जबकिमाछाउनीहरूको कार्य र उनीहरूका शब्दहरूका साथ अधिक विचारशील छन्। लि :्ग: शयनकक्षमा,माछार मेषलाई एक कनेक्शन बनाउन समस्या छ।बीस २०२०।
तपाईलाई मीन राशिफल साइनको बारेमा के जान्नु पर्छ?
मीनको मीनको बारेमा राशि १२ औं र अन्तिम चिन्ह हो। यो ज्ञात छ कि मीनले कुनै प्रकारले, यसैले, ले अन्य 11 लक्षणहरूको बिभिन्न विशेषताहरू लिन्छ। धेरैलाई उदार र करुणा मीनलाई निस्वार्थ लाग्छ, जबकि अन्यले महसुस गर्न सक्दछ कि उनीहरू (मीन-जन्मे) एक बच्चा कठोर वा स्थिर छन्।
मीन दैनिक पैसा र वित्त राशिफल के हो?
मीन दैनिक पैसा र वित्त राशिफल आज मीन राशि र वित्त कुंडली जीवनमा पैसाको प्रवाह प्रकट गर्दछ। मीन दैनिक क्यारियर र व्यापार राशिफल मीन दैनिक करिअर र व्यापार कुंडली तपाईंको क्यारियर हाइलाइट गर्दै छन्; व्यापार क्षमता।
जुन महिनाको मीन राशिफल के हो?
तपाईंको पूर्ण मीन साप्ताहिक राशिफल पढ्नुहोस्: May१ मे6जून २०२१ जुन तपाईंको परिवार, घर, अपार्टमेन्ट, परिवार, शहर र / वा देश, मीनको बारेमा हो। यो अनुहार, ठाउँ र ठाउँको एक विशाल फेरबदल अगाडि आउँदछ, आइतवार, अगस्त १ देखि मंगलबार, डिसेम्बर २१, २०२१ सम्म, मिथुनमा सेरेसको साथ खुला हुनेछ।
जनवरी २ 28 को राशिफल के हो?
व्यक्ति २ 28 जनवरीमा जन्मे: राशिफल कुंभ राशि हो। जनवरी २ 28 जन्मदिनको राशिफलले भविष्यवाणी गर्दछ कि तपाईं आफ्नो स्वतन्त्रताको मोल गर्नुहुन्छ! यस मिति को लागी जन्मदिन राशि कुम्भ हो। एक्वैरियनहरू पैसाको साथ सावधानी अपनाउँछन्।
फेब्रुअरी 6th को राशिफल के हो?
फेब्रुअरी odi राशि चिन्ह कुम्भ हो। व्यक्तिहरूको जन्मदिन अर्थ February फेब्रुअरी orn मा जन्म। यदि तपाईं फेब्रुअरी OR मा जन्मनुभयो भने, तपाईंको जन्मदिनको राशिफल प्रोफाइलले देखाउँदछ कि तपाईं एक हुनुहुन्छ जुन निर्धारण गर्न गाह्रो छ। यो छ ...
अक्टुबर १२ को राशिफल के हो?
अप्रिल १ को राशिफल के हो?
वृषभ राशिको मंगल कुन कुरामा आकर्षित हुन्छ?
लोकप्रिय प्रश्नहरूको उत्तम उत्तरहरू
जुलाई १ Birth जन्मदिनको राशिफल
जुलाई १ does मा जन्मनु भनेको के हो?
लियोका विशेषताहरू के हुन्?
तुला महिलाको कमजोरी के हो?
मार्च र्थडे राशिफल
मीनको व्यक्तित्व के हो?
मीन शुभ दिनहरू क्यालेन्डर जुन
कुन दिन मीनको लागि राम्रो छ?
मेष फेब्रु'१ Hor राशिफल
फेब्रुअरी १ ​​for को राशिफल भनेको के हो?
अगस्त १२ जन्मदिनको राशिफल
अगस्त १२ मा जन्मनु भनेको के हो?
डिसेम्बर २rd जन्मदिनको राशिफल
यसको मतलब के हो यदि तपाईको जन्म डिसेम्बर २ on मा भयो भने?
मीनमा नयाँ चन्द्रमा
मीन अमावास भनेको के हो?
अक्टुबर Birth जन्मदिनको राशिफल
अक्टुबर for को राशिफल के हो?